Ezekieri 40 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Ezekieri anoendeswa kuIsraeri muchiratidzo (1, 2)
Ezekieri anooneswa temberi (3, 4)
Zvivanze nemagedhi (5-47)
Gedhi rekunze rekumabvazuva (6-16)
Chivanze chekunze; mamwe magedhi (17-26)
Chivanze chemukati nemagedhi (27-37)
Dzimba dzaishandiswa patemberi (38-46)
Vharanda retemberi (48, 49)
40 Mugore rechi25 tiri nhapwa,+ pazuva rechi10 remwedzi wekutanga, mugore rechi14 kubva pakaparadzwa guta,+ pazuva iroro ruoko rwaJehovha rwaiva pandiri, uye akandiendesa kuguta racho.+ 2 Muchiratidzo chaakandionesa, Mwari akandiendesa kunyika yeIsraeri, akandiisa pagomo refu refu+ paiva nechivakwa chakaita seguta kumaodzanyemba. 3 Paakandiendesa ipapo, ndakaona murume aipenya semhangura.+ Aiva akabata tambo yemufurakisi* netsanga yekuyeresa,*+ uye akanga akamira pagedhi. 4 Murume wacho akati kwandiri: “Mwanakomana wemunhu, nyatsotarisa, nyatsoteerera, uye pfungwa dzako ngadzive pane zvese zvandichakuratidza, nekuti ndizvo zvawaunzirwa pano. Udza imba yaIsraeri zvese zvauri kuona.”+ 5 Ndakaona rusvingo rwaiva rwakapoteredza temberi.* Murume wacho aiva akabata tsanga yekuyeresa yainge yakareba makubhiti 6 (kubhiti rimwe nerimwe rainge rakawedzerwa urefu hweupamhi hwechanza).* Akatanga kuyera rusvingo rwacho uye upamhi hwarwo hwaiva tsanga imwe chete, rwakareba tsanga imwe chete. 6 Akabva aenda pagedhi raiva rakatarisa kumabvazuva,+ akakwira nemasitepisi aro. Akayera chidimbati* chegedhi racho achipinda mukati uye chaiva chakafara tsanga imwe chete, uye chimwe chacho chaiva chakafarawo tsanga imwe chete. 7 Imba imwe neimwe yevarindi yakanga yakareba tsanga imwe chete uye yakafara tsanga imwe chete, uye dzimba dzacho dzainge dzakaparadzana nemakubhiti mashanu.+ Chidimbati chegedhi racho icho chaiva pedyo nevharanda rainge rakatarisa mukati chaiva chakafara tsanga imwe chete. 8 Akayera vharanda regedhi racho iro raiva kudivi remukati rikaita tsanga imwe chete. 9 Akabva ayera vharanda regedhi racho, iro raiva makubhiti 8; uye akayera mbiru dzaro dzemumativi dzikaita makubhiti maviri. Vharanda regedhi racho raiva kudivi rakatarisa mukati. 10 Mugedhi rekumabvazuva maiva nedzimba nhatu dzevarindi kune rimwe divi nedzimwe nhatu kune rimwe divi. Dzimba dzacho nhatu dzakanga dzakaenzana uye mbiru dzaiva mumativi acho maviri dzakanga dzakaenzana. 11 Akabva ayera kufara kwesuo regedhi racho, rikaita makubhiti 10; uye gedhi racho rese rakanga rakafara makubhiti 13. 12 Kachikamu kaiva pamberi peimba yevarindi imwe neimwe kaiva kubhiti rimwe chete. Imba imwe neimwe yevarindi yaiva kumativi acho maviri yaiva yakafara makubhiti 6. 13 Akabva ayera gedhi racho kubvira padenga reimwe imba yevarindi* kusvika padenga reimwe yacho, uye paiva pakafara makubhiti 25. Masuo edzimba dzevarindi dzekune rimwe divi akanga akanangana nemasuo ekune rimwe divi.+ 14 Akabva ayera mbiru dzemumativi, idzo dzaiva dzakareba makubhiti 60. Akayerawo mbiru dzemumativi dzaiva mumagedhi aiva kumativi ese echivanze. 15 Kubva panotangira gedhi racho kusvika panoperera vharanda kudivi remukati megedhi racho paiva nemakubhiti 50. 16 Dzimba dzevarindi nembiru dzadzo dzemumativi, izvo zvaiva kumativi ese mugedhi racho, zvaiva nemahwindo aiva nemafuremu aienda achiita madiki.+ Mumavharanda acho maivawo nemahwindo kumativi ese, uye pambiru dzemumativi paiva nemifananidzo yemichindwe.+ 17 Akabva andiendesa muchivanze chekunze, uye ndakaona dzimba dzekudyira,+ nenzvimbo yakawaridzwa matombo yaitenderera chivanze chacho. Panzvimbo yacho paiva nedzimba 30 dzekudyira. 18 Nzvimbo yaiva mumativi emagedhi acho, iyo yainge yakawaridzwa matombo, yainge yakafara zvakaenzana nemativi marefu emagedhi acho. Nzvimbo iyi yakanga yakadzikira kupfuura chivanze chemukati. 19 Akabva ayera kubva pamberi pegedhi raiva pakadzikira kusvika paitangira chivanze chemukati. Paiva nemakubhiti 100 kumabvazuva uye makubhiti 100 kuchamhembe. 20 Chivanze chekunze chaiva negedhi rakanga rakatarisa kuchamhembe, uye akayera kufara kwaro nedivi raro refu. 21 Paiva nedzimba dzevarindi nhatu kumativi aro ese. Mbiru dzaro dzemumativi nevharanda racho zvakanga zvakangoenzana nezvegedhi rekutanga. Rakanga rakafara makubhiti 25 uye divi raro refu raiva makubhiti 50. 22 Mahwindo aro, vharanda raro, nemifananidzo yacho yemichindwe+ zvakanga zvakaenzana nezvegedhi rekumabvazuva. Paiva nemasitepisi 7 ekuti munhu asvike pariri uye vharanda raro raiva pamberi pawo. 23 Paiva negedhi raiva muchivanze chemukati rakanga rakatarisana negedhi rekuchamhembe nerimwe raiva rakatarisana nerekumabvazuva. Akayera kubva pagedhi kusvika pane rimwe gedhi rainge rakatarisana naro uye pakanga pakareba makubhiti 100. 24 Akazondiendesa kumaodzanyemba, uye ndakaona gedhi raiva kumaodzanyemba.+ Akayera mbiru dzaro dzemumativi nevharanda raro uye zvakanga zvakaenzana nezvimwe. 25 Raiva nemahwindo kumativi aro ese nepavharanda raro, uye mahwindo acho akanga akafanana nemamwe. Rakanga rakafara makubhiti 25 uye divi raro refu raiva makubhiti 50. 26 Paiva nemasitepisi 7 aikwidza kwariri,+ uye vharanda raro raiva pamberi pawo. Raiva nemifananidzo yemichindwe pambiru dzaro dzemumativi, divi rimwe nerimwe riine mufananidzo mumwe chete. 27 Chivanze chemukati chaiva negedhi rakatarisa kumaodzanyemba; akayera kubva pagedhi racho kusvika pane rimwe gedhi rekumaodzanyemba uye pakanga pakareba makubhiti 100. 28 Akazondipinza muchivanze chemukati nepagedhi remukati rekumaodzanyemba. Akayera gedhi racho uye raiva rakaenzana nemamwe. 29 Dzimba dzaro dzevarindi nembiru dzaro dzemumativi nevharanda raro zvakanga zvakaenzana nezvimwe. Raiva nemahwindo kumativi aro ese nepavharanda raro. Rakanga rakafara makubhiti 25 uye divi raro refu raiva makubhiti 50.+ 30 Kumativi ese kwaiva nemavharanda; akanga akafara makubhiti 25, achipinda mukati nemakubhiti 5. 31 Vharanda raro raiva rakatarisa chivanze chekunze, uye pambiru dzaro+ dzemumativi paiva nemifananidzo yemichindwe, uye paiva nemasitepisi 8 aikwidza kwariri.+ 32 Paakandipinza muchivanze chemukati nekumabvazuva, akayera gedhi racho uye rakanga rakaenzana nemamwe. 33 Dzimba dzaro dzevarindi nembiru dzaro dzemumativi nevharanda raro zvakanga zvakaenzana nezvimwe uye raiva nemahwindo kumativi aro ese nepavharanda raro. Rakanga rakafara makubhiti 25 uye divi raro refu raiva makubhiti 50. 34 Vharanda raro raiva rakatarisa chivanze chekunze, uye pambiru dzemumativi aro maviri paiva nemifananidzo yemichindwe, uye paiva nemasitepisi 8 aikwidza kwariri. 35 Akabva andipinza mugedhi rekuchamhembe+ akariyera; uye raiva rakaenzana nemamwe. 36 Dzimba dzaro dzevarindi nembiru dzaro dzemumativi nevharanda raro zvakanga zvakaenzana nezvimwe. Raiva nemahwindo kumativi aro ese. Rakanga rakafara makubhiti 25 uye divi raro refu raiva makubhiti 50. 37 Mbiru dzaro dzemumativi dzaiva dzakatarisa chivanze chekunze, uye mbiru dzaro dzemumativi dzaiva nemifananidzo yemichindwe, uye paiva nemasitepisi 8 aikwidza kwariri. 38 Pedyo nembiru dzemumativi dzegedhi racho paiva neimba yekudyira yaiva nesuo, uye imomo ndimo maisukirwa zvibayiro zvinopiswa.+ 39 Muvharanda regedhi rekuchamhembe maiva nematafura maviri kurudyi nemamwe maviri kuruboshwe ekuurayira zvibayiro zvinopiswa+ nezvibayiro zvechivi+ nezvibayiro zvemhosva.+ 40 Usati wapinda pagedhi racho rekuchamhembe, paiva nematafura maviri kurudyi uye matafura maviri kuruboshwe. 41 Divi rimwe nerimwe regedhi racho raiva nematafura mana, ese pamwe chete ari 8. Pamatafura acho ndipo paiurayirwa zvibayiro. 42 Matafura mana ekuurayira chibayiro chinopiswa ainge akagadzirwa nematombo akavezwa. Akanga akareba kubhiti rimwe chete nehafu, akafara kubhiti rimwe chete nehafu, uye akakwirira kubhiti rimwe chete. Midziyo yaishandiswa kuuraya mhuka dzezvibayiro zvinopiswa nedzezvimwe zvibayiro yaichengeterwa paari. 43 Madziro ese emukati aiva nemasherufu ainge akaenzana neupamhi hwechanza; uye nyama yemhuka dzaipiwa yaiiswa pamatafura acho. 44 Kunze kwegedhi remukati kwaiva nedzimba dzekudyira dzevaimbi;+ dzaiva muchivanze chemukati pedyo negedhi rekuchamhembe uye dzakanga dzakatarisa kumaodzanyemba. Paiva neimwe imba yekudyira yaiva yakatarisa kuchamhembe, pedyo negedhi rekumabvazuva. 45 Akati kwandiri: “Imba iyi yekudyira yakatarisa kumaodzanyemba ndeyevapristi vanoita mabasa emutemberi.+ 46 Imba yekudyira yakatarisa kuchamhembe ndeyevapristi vanoita basa repaatari.+ Ivo vanakomana vaZadhoki+ uye vaRevhi. Ndivo vakapiwa basa rekuenda pamberi paJehovha kuti vamushumire.”+ 47 Akabva ayera chivanze chemukati. Chakanga chakareba makubhiti 100, chakafara makubhiti 100; mativi acho ese akanga akaenzana. Atari yaiva pamberi petemberi yacho. 48 Akabva andipinza muvharanda retemberi yacho,+ akayera madziro emumativi mesuo revharanda racho. Chidziro chekuruboshwe chaiva neupamhi hwemakubhiti mashanu, chiine makubhiti matatu kune rimwe divi uye ndizvo zvakanga zvakaitawo chidziro chekurudyi. 49 Vharanda racho rakanga rakafara makubhiti 20, richipinda mukati nemakubhiti 11.* Kuti munhu asvike pariri, aifanira kukwira nemasitepisi. Paiva nembiru mbiri dzaiva pedyo nemadziro emumativi mesuo. Imwe yaiva kuruboshwe imwe iri kurudyi.+
^ ChiHeb., “imba.” Shoko rekuti “temberi” ndiro rakashandiswa muzvitsauko 40-48 panzvimbo perekuti “imba.” Shoko racho rinenge richireva zvivakwa zvese zvepatemberi kana kuti temberi yacho chaiyo.
^ Kureva, pamusuo panotsikwa nevanhu kana vachipinda mukati.
^ Zvichida zviri kureva pamusoro pemadziro eimba yevarindi.
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “12.”